सात जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई बेनीमा प्राइमरी ट्रमा केयर तालिम: NSI Nick Simons Institute
सात जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई बेनीमा प्राइमरी ट्रमा केयर तालिम
11 Apr, 2018 By: प्रताप बानियां
विभिन्न ७ ओटा जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा प्राइमरी ट्रमा केयरसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । निक साईमन्स इस्टिच्युटको प्राविधिक सहयोग र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीको आयोजनामा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको हो । आकस्मिक दुर्घटना हुँदा, भूकम्प जाँदा, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा बिरामीको व्यवस्थापन गरी उपचार गर्ने विधि सिकाउन तालिम सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
तालिममा चोटपटक लागेर घाइते भएका बिरामीको पहिचान गरेर तुरुन्तै उपचार गर्न, छाती, मुटु र फोक्सोमा रगत जम्ने र हावा भरिएको, धेरै रगत बगेको तथा हड्डी बाहिर निस्केका बिरामीको तत्काल उपचार गर्ने विधि सिकाइएको थियो । दुर्घटनामा परेका बिरामीको ज्यान बचाउन तुरुन्तै गरिने उपचारको तयारीबारे सिकाइएको वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर रोशन न्यौपानेले बताए । उनले बिरामीहरुमा भएका चोटलाई थप जटिल हुन नदिन र उनीहरुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने तरिका र विधि समेत जानकारी गराइएको बताएका छन् । तालिमको क्रममा विभिन्न स्टेशनमा प्रयोगात्मक अभ्यास समेत गरिएको बताइएको छ ।
उक्त तालिममा सडक तथा अन्य दुर्घटना र चोटपटक लागेर आएका बिरामीको कसरी उपचार गर्ने भन्नेबारे विभिन्न तरिका एवं विधिहरु सिकाइएको निक साईमन्स इस्टिच्युटका जिल्ला अस्पताल सहयोग कार्यक्रम संयोजक शारदा शाहले बताइन् । उनका अनुसार घाइते मानिसहरुलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पतालसम्म पु¥याउने क्रममा थप घाइते हुन नदिन अपनाइने उपायबारे पनि सिकाइएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको तालिमको पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ ललितपुरका डा. योगेन्द्र अमात्य, डा. योगेश केसी, डा. कैलाश क्षत्री र धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रामप्रसाद खनालले सहजीकरण गरेका थिए । तालिममा म्याग्दीसहित सल्यान, प्युठान, बर्दिया, अर्घाखाँची, गुल्मी र कपिलबस्तु जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
तालिम समापनमा बोल्दै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख समेत रहेका डा. न्यौपानेले तालिममा सिकेका ज्ञान र सिपलाई पूर्णरुपमा व्यवहारमा उतानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रम निक साईमन्सका तालिम प्रवन्धक ईन्द्र राईको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । निक साईमन्सले विभिन्न जिल्लामा दक्ष जनशक्ति, उपकरणलगायत स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गर्नुका साथै तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।